Semalt विशेषज्ञले कसरी ब्लग स्क्रिन स्क्र्याप गर्ने बारे बताउँछ
के तपाई इन्टरनेटबाट डाटा स्क्र्याप गर्न चाहानुहुन्छ? के तपाइँ एक भरपर्दो वेब क्रलरको खोजीमा हुनुहुन्छ? एक वेब क्रलर, जसलाई बोट वा स्पाइडर पनि भनिन्छ, वेब अनुक्रमणिका उद्देश्यको लागि व्यवस्थित रूपमा इन्टरनेट ब्राउज गर्दछ। खोजी ईन्जिनहरूले बिभिन्न स्पाइडरहरू, बट्स र क्रलरहरू प्रयोग गर्दछन् उनीहरूको वेब सामग्री अपडेट गर्न र साइटलाई वेब क्र्रालरद्वारा उपलब्ध गराईएको जानकारीको आधारमा श्रेणी। त्यस्तै, वेबमास्टरहरूले बिभिन्न बोटहरू र माकुरोहरू प्रयोग गर्न सजिलो पार्नको लागि खोजी ईन्जिनहरूका लागि उनीहरूको वेब पृष्ठहरू श्रेणीकरण गर्न सजिलो हुन्छ।
यी क्रॉलरहरूले दैनिक आधारमा श्रोतहरू र लाखौं वेबसाइटहरू र ब्लगहरू उपभोग गर्छन्। तपाइँले लोड र तालिकाको मुद्दाहरूको सामना गर्नुपर्नेछ जब वेब क्रलरहरूमा पहुँच गर्नका लागि पृष्ठहरूको ठूलो संग्रह हुन्छ।
वेब पृष्ठहरूको संख्या अत्यन्त ठूलो छ, र उत्तम बट्स, माकुरा र वेब क्रलरहरू पूर्ण सूचकांक बनाउन कम हुन सक्छ। यद्यपि, डीपक्रॉलले वेबमास्टरहरू र खोज ईन्जिनहरूका लागि बिभिन्न वेब पृष्ठहरू सूचकांक गर्न सजिलो बनाउँदछ।
डीपक्रोलको एक सिंहावलोकन:
डीपक्रॉलले विभिन्न हाइपरलिंकहरू र एचटीएमएल कोड मान्य गर्दछ। यो इन्टरनेटबाट डाटा स्क्र्याप गर्न र एक पटकमा विभिन्न वेब पृष्ठहरूमा क्रल गर्न प्रयोग गरिन्छ। के तपाइँ प्रोग्रामिंगको क्रममा अर्को प्रक्रियाको लागि वर्ल्ड वाइड वेबबाट विशेष जानकारी क्याप्चर गर्न चाहानुहुन्छ? DeepCrawl को साथ, तपाईं एक समयमा धेरै कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै समय र ऊर्जा बचत गर्न सक्नुहुनेछ। यस उपकरणले वेब पृष्ठहरू नेभिगेट गर्दछ, उपयोगी जानकारी निकाल्छ, र तपाईंलाई उचित तरिकाले तपाईंको साइटलाई अनुक्रमणिकामा मद्दत गर्दछ।
वेब पृष्ठहरूमा अनुक्रमणिकामा कसरी डीपक्रॉल प्रयोग गर्ने?
चरण # १: डोमेन संरचना बुझ्नुहोस्:
पहिलो चरण भनेको डीपक्रोल स्थापना गर्नु हो। क्रल सुरु गर्नु अघि, तपाईंको वेबसाइटको डोमेन संरचना बुझ्न यो पनि राम्रो छ। Www / non-www वा http / https को डोमेनमा जानुहोस् जब तपाईं एक डोमेन थप्नुहुन्छ। तपाईंले वेबसाइटले उप-डोमेन प्रयोग गरिरहेको छ वा छैन भनेर पनि पहिचान गर्नुपर्नेछ।
चरण # २: परीक्षण क्रल चलाउनुहोस्:
तपाईं सानो वेब क्रलको साथ प्रक्रिया सुरू गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको वेबसाइटमा सम्भावित मुद्दाहरूको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट जाँच गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर पनि तपाईले जाँच गर्नुपर्नेछ। यसका लागि तपाईंले कम मात्रामा "क्रल सीमा" सेट गर्नुपर्नेछ। यो पहिलो चेक अधिक कुशल र सही बनाउँदछ, र परिणामहरू पाउन तपाईंले घण्टा कुर्नु पर्दैन। सबै URL हरू त्रुटि कोडहरू सहित returning०१ जस्तो स्वचालित रूपमा अस्वीकार गरियो।
चरण # 3: क्रल प्रतिबन्धहरू थप्नुहोस्:
अर्को चरणमा, तपाईं अनावश्यक पृष्ठहरू बाहेक क्रॉलको आकार कम गर्न सक्नुहुनेछ। प्रतिबन्धहरू थप्नाले यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं यूआरएलहरू क्रॉल गर्नेमा तपाईंको समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्न जुन महत्वहीन वा बेकार हो। यसको लागि तपाईले "उन्नत सेटिंग्समा प्यारामिटर हटाउने बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र महत्वहीन यूआरएलहरू थप्नुपर्नेछ। डीपक्रॉलको" रोबोट ओभरराइट "सुविधाले हामीलाई थप URL हरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ जुन कस्टम रोबोट्स। टेक्स्ट फाईलसँग बहिष्कृत गर्न सकिन्छ, हामी लाइभ वातावरणमा नयाँ फाइलहरू पुर्‍याउने प्रभावहरूको परीक्षण गर्छौं।
तपाइँ यसको "पृष्ठ समूहीकरण" सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ छिटो वेगमा तपाइँको वेब पृष्ठहरू अनुक्रमणिका गर्न।
चरण #:: तपाईका नतीजाहरूको परीक्षण गर्नुहोस्:
एकचोटि जब डीपक्रॉलले सबै वेब पृष्ठहरू अनुक्रमणिका गर्‍यो, अर्को चरण परिवर्तनहरूको परीक्षण गर्न र तपाईंको कन्फिगरेसन सहि छ भनेर निश्चित गर्नु हो। यहाँबाट तपाई "क्रल सीमा" बढाउन सक्नुहुनेछ अधिक गहन क्रल चलाउनु अघि।